Super Bowl Flyovers - Iindleko kubathengi
Amajoni ayaqhubeka nenkcubeko ngaphandle kohlahlo lwabiwo mali
Isiko elide le-US Air Force okanye i-US Navy ukwenza i-flyover phambi kwayo yonke i-Super Bowl, kodwa ingakanani loo nto ixabisa abahlawuli berhafu baseMelika?
Ngo-2015, i-Super Bowl flyover iya kubiza i-$ 1.25 nganye kwi-63,000 abalandeli bebhola bebhola kwi-Yunivesithi yasePhoenix Stadium ePhoenix, eArizona, ngeCawa, ngoFebruwari 1.
Faka enye indlela: I-Super Bowl igxobhoza ibiza abahlawuli berhafu malunga ne-80,000 zama-gesi kunye nezinye iindleko zokusebenza.
"Kukho iindleko ezincinci ezibandakanyekayo kwi-flyover," i-Adarir Rearal, uJohn Kirby, unobhala we-Pentagon press kunye nomkhulumeli wenobhala wezoKhuseleko, wathi iintsuku ngaphambi koMgqibelo we-NFL we-2015 phakathi kweNew England Patriots kunye ne-Seattle Seahawks. "Ndicinga ukuba yonke into, isobho kumantongomane we-flyover, iya kuba neendleko kwiindawo ezingama-80,000 zamawaka."
Kutheni i-Military Performs Flyovers
Isebe loKhuseleko lithi i-Air Force flyovers yindlela yobudlelwane boluntu kwaye iqhutyelwa "kwiziganeko zobuqili belizwe."
"Akuyindleko enkulu, kwaye ndiyakwazi, ngokucacileyo, sikhumbuze ukuba simele sizuze inzuzo," kusho uKirby. "Kwaye kukho inzuzo yokufumanisa ukuba i-US Air Force Thunderbirds ibhawule, iqela eliyaziwayo, elidumile, kwaye ngokuqinisekileyo kusinceda ngokugcina ukukhanya kwethu ngaphandle kwabantu baseMerika."
U-Kirby wongezwa: "Ndicinga ukuba bayathandwa kakhulu, ezi ntlanzi."
Isebe loKhuseleko lifumana izicelo ezingaphezu kwe-1 000 zeefyovers kwiziganeko zemidlalo minyaka yonke. Iindudla nezinye iikhampani zamkela ezininzi zazo, kubandakanywa iintlanga ze-NASCAR kunye nemidlalo ebalulekileyo yebhola.
Ama-Blue Angels ase-US aseMelika enza ezinye ze-Super Bowl flyovers, ngokunjalo, kuquka omnye ngo-2008 phezu kwebala lezemidlalo.
Akukho mntu wangaphakathi wabona i-flyover, nakuba ababukeli bamabonwakude bebenzela malunga nemizuzwana engama-4.
"Ngokwempawu zokubhengezwa kwayo, ndiza kuthetha ukuba kuyafaneleka ukuba uhlawule iindleko zokubhengeza ngexesha le-Super Bowl. Abantu abaninzi bebona i-jets zethu eziluhlaza kwaye baqaphele i-Navy, kubhetele kuthi," uBlue I-Angels igosa laseCapt, uTyson Dunkelberger, watshela iLost Angeles Times ngo-2008.
Ingxabano Ngaphezulu kwe-Super Bowl Flyovers
Abanye abagxeki bathi umnqweno we-Super bowl uyinkunkuma yerhafu yabahlawuli berhafu.
Umgcini wekhompiyutha waseWashington uSally Jenkins, ebhala nge-2011 Super Bowl flyover e-Cowboys Stadium eDallas, wathi:
"Ngaphandle kokungaziqondi, kuthekani malunga nazo zine zeMavy F-18 ezihamba ezinkundleni kwinqanaba - kunye nomhlaba ophephekayo ophahleni? Wonke umntu ngaphakathi angabona kuphela iiplani kwiikrini zevidiyo zebala lemibala. Abahlawuli berhafu? Ndiza kukuxelela: $ 450,000. (I-Navy iyalungisa iindleko ngokutsho okulungileyo ukuqeshwa.) "
Abanye banemibuzo yokuba kutheni urhulumente echitha izigidi zama-dollar ngonyaka kwi-flyovers ngexesha elifanayo ukuthungulwa kwemali kuye kwanciphisa imali-mali yayo.
Ibali edibeneyo: Yintoni ukuCandwa?
"Ukuba kukho nayiphi na isabelo sebhajethi yesigqeba sokusasaza siya kuphazamiseka, isenzo seenqwelo ezindizayo kwi-stadium ephakamileyo siza kusisusa," kubhala uMike Florio we-NBC Sports.
"... Njengoko ithuluzi lokuqeshisa ixabiso layo liyibuzaza."
I-Movie Live Best Movies Movies
UShogatsu - Unyaka Omtsha waseJapan
Iibhenki ze-Hawk - Iilwimi eziphakathi kunye ne-Mississippian Trinkets
Ukuchonga nokulungisa iVebhu Iintsilelo zokuTyala
Iibhiliyoni ezixhamle kwi-Obamacare Inkxaso-mali Yenkxaso
I-Cycle Life ye-Jellyfish